गृह - मेरो ड्राइभर इजाजतपत्र
वास्तविक कागजात अनलाइन खरीद गर्नुहोस्
ड्राइभरको इजाजतपत्र अनलाइन
वास्तविक / नक्कली पासपोर्ट
वास्तविक / नक्कली आईडी कार्डहरू
एक्सप्रेस VISA को लागी आवेदन गर्नुहोस्
सामाजिक सुरक्षा नम्बर (SSN)
कानूनी / नक्कली भूमि शीर्षक
सम्पादित बैंक विवरण
स्कूल प्रमाणपत्र र डिप्लोमा
परीक्षा बिना ड्राइभर इजाजतपत्र पंजीकृत
ड्राइभर इजाजतपत्रको लागि आवेदन दिनुहोस्
अन्तर्राष्ट्रिय ड्राइविंग परमिट (IDP)
एक्सप्रेस चालकको लाइसेन्स मूल्य
अस्थायी ड्राइभिंग इजाजतपत्र
नवीकरण गर्नुहोस्, तपाईंको ड्राइभरको इजाजत पत्र परिवर्तन गर्नुहोस्
दोस्रो पासपोर्ट किन्नुहोस्
डिप्लोमेटिक पासपोर्ट अर्डर गर्नुहोस्
युएस ग्रीन कार्ड अनलाइन
वास्तविक एक्सप्रेस पासपोर्ट अनलाइन
राहदानी अनलाइनका लागि आवेदन दिनुहोस्
DL कोटी ए, बी, सी
कसरी अनलाइन अर्डर गर्ने
ड्राइभरको इजाजतपत्र अनलाइन किन्नुहोस्
युरोपमा अनलाइन ड्राइभर इजाजतपत्र कहाँ अर्डर गर्ने तपाईं जर्मनीमा हुनुहुन्छ, वा कुनै…
आवास अनुमति अनलाइन किन्नुहोस्
वैध निवास अनुमति अनलाइन किन्नुहोस् र युरोप, अमेरिका, क्यानडामा बस्नुहोस् MDL मा, तपाईंले…
वास्तविक एक्सप्रेस पासपोर्ट अनलाइन किन्नुहोस्
एक्सप्रेस क्यानेडियन राहदानी अनलाइन बिक्रीको लागि प्राप्त गर्नुहोस् बायोमेट्रिकको साथ एक वास्तविक, वैध वास्तविक एक्सप्रेस क्यानाडाली राहदानी…
कागजातहरूका लागि कसरी भुक्तानी गर्ने
बिटकोइन मार्फत कागजातहरूको लागि भुक्तान गर्नुहोस् के तपाई बिटकोइनसँग निपुण हुनुहुन्छ? यो सबैभन्दा भरपर्दो क्रिप्टो हो...
वास्तविक एक्सप्रेस कागजातहरू अनलाइन किन्नुहोस्
अनलाइन कागजात चाहनुहुन्छ र यसलाई वास्तविक छिटो चाहिन्छ? खोजी समाप्त हुनुपर्छ! यहाँ MDL मा, हामी तपाईंको कागजातहरू या त मौलिक वा नक्कली धेरै छोटो अवधिमा उत्पादन गर्छौं। लामो प्रक्रिया र प्रोटोकलको माध्यमबाट नगई कागजातहरू प्राप्त गर्नको लागि स्पष्ट मार्ग प्रदान गर्दा हामी उत्कृष्ट छौं। तपाईं के को लागि प्रतीक्षा गर्दै हुनुहुन्छ?
दर्ता गरिएका राहदानीहरू अर्डर गर्नुहोस्
हामीले 120 भन्दा बढी देशहरूको लागि राहदानी उत्पादन गर्छौं। हाम्रो मुख्य फोकस युरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानडामा छ। तपाईं एक नजर लिन सक्नुहुन्छ!
हाम्रो पासपोर्टहरू ब्राउज गर्नुहोस्
डाटाबेस दर्ता गरिएको चालक लाइसेन्स किन्नुहोस्
यहाँ, तपाइँ कुनै पनि परीक्षा बिना वास्तविक चालक लाइसेन्स अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। उत्पादन सामान्यतया 3-5 काम दिन लाग्छ!
हाम्रो ड्राइभर लाइसेन्स ब्राउज गर्नुहोस्
हाम्रा कागजात सेवाहरू
परीक्षण 2022 बिना ड्राइभर लाइसेन्स अर्डर गर्नुहोस्
के तपाई ड्राइभिङ टेस्ट र परीक्षा दिएर दिक्क भएर पनि सफलता पाउनुहुन्न? के तपाई ड्राइभिङ गर्न जान्नुहुन्छ तर ड्राइभर लाइसेन्स छैन? यदि तपाइँ अनलाइन ड्राइभर इजाजतपत्र कहाँ किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने यो हो। हामी IT पेशेवरहरूको समूह हौं जसले तपाईंलाई केवल 3-5 कार्य दिनहरूमा वास्तविक ड्राइभर इजाजतपत्र प्राप्त गर्दछ। तपाईं आफ्नो विदेशी ड्राइभिङ लाइसेन्स परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ आफ्नो ड्राइभिङ लाइसेन्स नवीकरण गर्नुहोस्। हामी मात्र उत्कृष्ट छौं। तपाईं के को लागि प्रतीक्षा गर्दै हुनुहुन्छ? आदेश अब
दर्ता गरिएको यात्रा पासपोर्ट किन्नुहोस्
तपाईं यात्रा को एक प्रशंसक हुनुहुन्छ? शरण खोज्दै हुनुहुन्छ? तपाईले गर्नु पर्ने भनेको एक प्रामाणिक राहदानी अनलाइन किन्नु हो यहाँ। हामी तपाईंको राहदानी 5-6 कार्य दिनमा उत्पादन गर्छौं। यो सरकारी डाटाबेसमा दर्ता छ। यदि तपाईंलाई नक्कली राहदानी चाहिन्छ भने, हामी तपाईंलाई सस्तो मूल्यमा प्राप्त गर्नेछौं। नक्कली राहदानी कागजात डाटाबेसमा दर्ता गरिएको छैन। हामी बोलिभिया बाहेक संसारका सबै देशहरूको लागि राहदानी उत्पादन गर्छौं। अब अर्डर गर्नुहोस्.
के तपाईं कम उमेरका हुनुहुन्छ र रात्रि क्लब वा क्यासिनोहरू भ्रमण गर्न आवश्यक छ? हामी तपाईंलाई प्राप्त गरेर त्यो यहाँ गर्न सक्छौं उच्च स्क्यान योग्य आईडी कार्डहरू। तपाई आफ्नै देशमा अपराधीको रुपमा चिनिन चाहनु हुन्न ? यहाँ US, EU र UK आईडी कार्डहरू अनलाइन किन्नुहोस् र पैसा बचत गर्नुहोस्। परिचयपत्र तीन दिनमा उत्पादन र दर्ता हुन्छ। यो DHL, UPS, EMS मार्फत सिधै तपाईंको ढोकामा डेलिभर गरिन्छ। अब अर्डर गर्नुहोस्
NCLEX प्रमाणपत्र मूल्य २०२२
तपाई पक्कै पनि अमेरिकामा नर्स वा मेडिकल कर्मी बन्न चाहानुहुन्छ त्यसैले सम्पूर्ण विश्व, सही? तपाईं यहाँ द्वारा समय बचत गर्न सक्नुहुन्छ लागू र MDL बाट NCLEX प्रमाणपत्रहरू अर्डर गर्दै। हामी तपाईलाई २-३ कार्यदिवसमा प्रमाणपत्र पाउँछौं। यदि तपाइँ संयुक्त राज्य अमेरिकामा इजाजतपत्र खोज्दै हुनुहुन्छ भने NCLEX परीक्षाहरू मध्ये कुनै पनि लिनको लागि आधार लागत $2हो, तपाइँ जहाँ बस्नुहुन्छ भन्ने आधारमा, तपाइँको राज्यको नर्सिङ बोर्डलाई थप दर्ता शुल्क चाहिन्छ। तर यहाँ, हामी यसलाई सामान्य भन्दा छिटो पाउँछौं र तपाईले कुनै परीक्षा दिनुहुन्न त्यसैले उच्च मूल्य। अब अर्डर गर्नुहोस्
निवास अनुमति अनलाइन किन्नुहोस्
यहाँ MDL मा नागरिकता सुनिश्चित गरिएको छ। एक निवास अनुमति अनलाइन किन्न चाहनुहुन्छ? सही समय र स्थान। यहाँ, हामी तपाईंलाई केवल 3-4 कार्य दिनहरूमा निवास अनुमति दिन्छौं। हामीले उत्पादन गरेको यो निवास अनुमति उचित मूल्यमा छ। यदि तपाई विदेशमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी वर्क परमिट पनि दिन्छौं। तपाईले हामीलाई सम्पर्क गरेको एक हप्ता पछि अमेरिका, EU, UK, अष्ट्रेलिया र आफ्नो मनपर्ने कुनै पनि महादेशमा बस्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। किन छैन अब सम्पर्क गर्नुहोस् र निवास अनुमति प्राप्त गर्नुहोस्
३ दिनमा सबै कागजातहरू अर्डर गर्नुहोस्
MDL मा, हामी उत्पादन र सेवाहरूको एकदम विस्तृत श्रृंखला उत्पादन गर्छौं। हामीले केही नाम मात्रै दिएका छौँ । केही अन्य कागजातहरू हामी उत्पादन गर्छौं;
बैंक विवरणहरू, मेडिकल प्रमाणपत्र, SSN, IELTS र TOEFL, भूमि शीर्षकहरू, स्कूल डिप्लोमा र प्रमाणपत्रहरू आदि
यी सबै माथि उल्लेखित कागजातहरू यहाँ उपलब्ध छन्। तपाईंले हामीबाट प्रमाणपत्रहरू अर्डर गर्दा हामी तपाईंलाई उत्तम पाउँछौं भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्छौं। अब अर्डर गर्नुहोस्
हाम्रा केही ग्राहकहरू हाम्रा कागजात सेवाहरूको बारेमा के भन्छन्
म धेरै ड्राइभिङ परीक्षण असफल भएको थियो। वास्तविक जर्मन ड्राइभर इजाजतपत्र र MDL को साथ पासपोर्टको लागि आवेदन गर्ने यो मेरो पहिलो पटक थियो। यो धेरै सरल थियो र तिनीहरूले कुनै पनि समस्याहरू चाँडै समाधान गर्न हामीसँग काम गरे, हराएको वा हराएको कागजातहरू पनि र हामीले हाम्रो राहदानी र वाचा गरेपछि ड्राइभर लाइसेन्स प्राप्त गर्यौं। धेरै छिटो सेवाहरू साथीहरू। अति खुशी !!! Jurgen Neuer D. Augsburg, जर्मनी
जुर्गेन नेउर डी।ट्यूटोरियल
पहिले मैले यो घोटाला हो भन्ने सोचें। सबै कुरा यति छिटो भयो। म एक पटक अन्यत्र 5,000 युरो ठगिएको थिएँ। त्यसपछि मैले MDL मा अन्तिम प्रयास गर्ने निर्णय गरें। राम्रो स्वर्ग, तिनीहरूले मेरो स्विडेनी ड्राइभर लाइसेन्स मात्र3दिनमा उत्पादन गरे। म पछि जाँच गर्न Transportstyrelsen कार्यालय गएँ र यो दर्ता भएको थियो! जादू जस्तै !!! आज मेरो श्रीमान् र मेरो छोराले अन्ततः यहाँ स्विडेनी राहदानी र रोमानियाली ड्राइभर लाइसेन्स पाएका छन्। धन्यवाद साथीहरु! अँगालो !!!
नमस्कार, कृपया अर्को पटक छिटो हुने प्रयास गर्नुहोस्। मैले क्यानेडियन निवास अनुमति आदेश दिएँ - तपाईहरूबाट ग्रीन कार्ड र जग्गा प्रमाणपत्र। स्पष्ट रूपमा, तपाईंले सोचेभन्दा बढी समय लिनुभयो। मैले मेरो कागजातहरू प्राप्त गरे पनि म खुसी छु। राम्रो काम गरीरह्नु!
म तपाईहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। म अब पूर्ण EU नागरिक हुँ। मसँग अब मेरो EU राहदानी (बेल्जियम), जन्म प्रमाणपत्र, आईडी कार्ड र ड्राइभर लाइसेन्स छ। मलाई तपाईंबाट केही अन्य कागजातहरू चाहिन्छ। त्यसैले म पक्कै पनि तपाईलाई फेरि सम्पर्क गर्नेछु। धेरै धेरै धन्यवाद। रीटा जी ब्रसेल्स, बीजी।
रीटा जीव्यवसायी महिला
मैले पाइलट लाइसेन्स र डुङ्गा लाइसेन्स अनलाइनबाट कहाँ पाउन सकिन्छ भनेर खोजेको थिएँ। MDL लाई धन्यवाद जसले यो सेवा प्रदान गर्ने मात्र हो। तिनीहरू अद्भुत छन्! मैले यहाँ प्राप्त गरेको निजी पाइलट इजाजतपत्र अब म स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्छु। म तपाईंलाई 4.5 तारा मूल्याङ्कन दिनेछु! तपाईलाई सबै5दिन सक्दिन ... hahahaha!
जिम मोरेनोनिजी पायलट
डाटा प्रमाणिकरण र सुरक्षा
हाम्रा मूल कागजातहरू कडाईका साथ परीक्षण र प्रमाणित गरिएका छन्। यद्यपि, जो कोहीले पनि सरकारी वेबसाइट प्रयोग गरेर र प्रत्येक कागजातको लागि उपलब्ध गराइएको टेलीपोइन्ट कोड वा प्रमाणीकरण डिस्केट राखेर कागजात प्रमाणित गर्न सक्छन्। तपाईं हामीबाट कागजातहरू अर्डर गर्दा यी सबै कसरी गर्ने भनेर हामी तपाईंलाई निर्देशन दिन्छौं।
ग्राहकको डाटा गोपनीयता: तपाईको डाटा हामीसँग धेरै सुरक्षित छ। हामी तपाईंको सहमति बिना यसलाई कतै पनि उजागर गर्दैनौं। त्यसैले हाम्रो ग्राहकको रूपमा हामीबाट मौलिक वा नक्कली कागजातहरू खरिद गर्दा, तपाईं सुरक्षित हुनुहुन्छ!
हाम्रो परिष्कृत सामग्री:
हामीसँग सरकारी एजेन्टहरूसँग बलियो सम्बन्ध छ जसले हामीलाई वास्तविक कागजातहरू उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने उत्कृष्ट सामग्रीहरू प्रदान गर्दछ। हामीले विशेष कागज, इन्टाग्लियो प्रिन्टिङ, माइक्रो प्रिन्टिङ, र फ्लोरोसेन्ट रंगहरू जस्ता उच्च गुणस्तरका सामग्रीहरू प्रयोग गर्छौं जुन नाङ्गो आँखाले पत्ता लगाउन नसकिने र केही परीक्षण मेसिनहरू पनि छन्। यद्यपि, हामी नक्कली कागजातहरूको लागि सिफारिस गर्दैनौं र हाम्रा ग्राहकहरूलाई वास्तविक कागजातहरू, राहदानीहरू, परिचयपत्रहरू, आदिको लागि मात्र जान सल्लाह दिन्छौं जुन अन्य देशहरूमा पनि पहुँच गर्न सकिन्छ।
स्क्यान गर्न मिल्ने कागजातहरू:
हाम्रा वास्तविक कागजातहरू सबै परिष्कृत रूपमा प्रयोग गरेर उत्पादन गरिन्छ; असफलताको कुनै गुंजाइश छैन। हाम्रा वास्तविक कागजातहरूमा सबै आवश्यक सुरक्षा चिन्हहरू छन् जसले यसलाई स्क्यानिङ परीक्षण र प्रमाणीकरणका सबै स्तरहरू पास गर्न अनुमति दिन्छ।
बायोमेट्रिक डाटा दर्ता:
जब तपाइँ हामीबाट राहदानी, भिसा वा अन्य कागजातहरू अर्डर गर्नुहुन्छ, हामी तपाइँलाई निम्न प्रदान गर्न आग्रह गर्दछौं: हामी तपाइँको फिंगरप्रिन्ट, हात ज्यामिति, इयरलोब ज्यामिति, रेटिना र आईरिस ढाँचा, आवाज तरंगहरू, DNA र हस्ताक्षर सहित तपाइँको अद्वितीय पहिचानकर्ताहरू प्रयोग गर्दछौं। सरकारी डाटाबेस। त्यसोभए, यदि आवश्यक छ भने, तपाइँको बायोमेट्रिक जानकारी सरकारी डाटाबेस प्रणाली प्रयोग गरेर जहाँबाट पहुँच गर्न सकिन्छ। यदि तपाइँसँग जानकारीको कुनै बेमेल वा खराब रेकर्ड छ भने, हाम्रा विशेषज्ञहरूले तिनीहरूलाई नयाँसँग बदल्न र सरकारको नजरमा सच्याउन सक्छन्।
चेतावनी!!! धोखाधडी र घोटालाहरूबाट सावधान रहनुहोस्!
त्यहाँ धेरै नक्कली कागजात प्रदायकहरू अनलाइन उपलब्ध छन् जसले केवल सस्तो र नक्कली कागजातहरू प्रदान गर्दछ जुन वास्तविक रूपमा भेषमा छन्। अनलाइन कागजातहरू खरिद गर्दा सावधान रहनुहोस् किनकि तपाईंको गल्तीले तपाईंलाई ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्छ। तर हामीसँग, तपाईं पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुनुहुन्छ। हामी सुनिश्चित गर्छौं कि हाम्रा सबै वास्तविक कागजातहरू 100% वास्तविक छन् र सरकारी डाटाबेसमा दर्ता भएका सबै आधिकारिक राज्य मापदण्डहरू पूरा गर्छन्। यस बाहेक, हामी तपाइँको जानकारी सुरक्षा र गोपनीयता को धेरै तहहरु संग हामी भित्र रहेको सुनिश्चित गर्दछौं। तपाईं हाम्रो के जाँच गर्न सक्नुहुन्छ सन्तुष्ट ग्राहकहरु भन्छन् हाम्रोबारे। तपाईंका समस्याहरू समाधान गर्न मद्दत गर्न तपाईंले हाम्रा विशेषज्ञ सल्लाहकारहरूसँग नि:शुल्क भेटघाट तय गर्न सक्नुहुन्छ। MDL तपाईको लागि उत्तम ठाउँ हो!
फिर्ता रकम: कागजातहरू नपुगेको वा अन्य असुविधाको कुनै पनि अवस्थामा, 99.00% तपाइँको पैसाको समान भुक्तानी विधि मार्फत तपाइँलाई फिर्ता गरिन्छ!
पैसा फिर्ता ग्यारेन्टी 99%
ग्राहक सन्तुष्टि 97%
हाम्रो उत्पादन संख्या
कागजातहरू प्रति महिना उत्पादन
कुल कागजातहरू उत्पादन
फ्लोरिडा र लन्डनमा डु Lic्गा लाइसेन्स खरीद गर्नुहोस्
युरोपमा मल्टि-क्रू पायलट लाइसेन्स-एमपीएलको लागि आवेदन दिनुहोस्
वास्तविक निजी पायलट लाइसेन्स पीपीएल बिक्रीको लागि
कसरी वाणिज्यिक पायलट लाइसेन्स- CPL अनलाइन खरीद गर्न
तपाईंको कागजातहरू अर्डर गर्न हामीलाई यहाँ सम्पर्क गर्नुहोस्
फोन पूर्व: +४९ १५२१... *
EU ड्राइभरको इजाजतपत्र खरीद गर्नुहोस्
युके ड्राइभिंग लाइसेन्स खरीद गर्नुहोस्
अमेरिकी ड्राइभरको इजाजतपत्र किन्नुहोस्
अन्य ड्राइभर इजाजतपत्रहरू
प्रतिलिपि अधिकार @MyDriversLicence। सबै अधिकार सुरक्षित।
हामीलाई यहाँ व्हाट्सएप मार्फत सन्देश पठाउनुहोस्
कसरी हामी तपाइँलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ?